Ducooyinka Axdiga Naxariista | QODOBADA SALAADA
Bogga ugu weyn Dhibcaha salaadda Ducooyinka axdiga ee Naxariista
Maanta waxaan la macaamili doonnaa salaadda axdiga naxariis darteed. Waa maxay naxariis? Waa cafis ama naxariis loo fidiyo dembiilaha. Sidoo kale, naxariistu waxay furi kartaa albaabo qufulan, waxay sababi kartaa horumar iyo gargaar ka samatabbixinta awoodda mugdiga. Buugga Baroorashadii Yeremyaah 3: 22-24 Rabbiga naxariistiisu weligeed ma sii socoto. naxariistiisu weligeed ma dhammaanayso; Subax walba way cusub yihiin; Aaminnimadaadu waa weyn tahay, Oo waxay tidhi, Rabbigu waa qaybtaydii, sidaas daraaddeed isagaan rajo ku qabi doonaa.
Qorniinku wuxuu ina fahamsiinayaa in naxariista Eebbe ee joogtada ahi aanay dhammaanayn. Jiilba jiilba jiilka kale, Ilaah wuxuu ilaaliyaa ballanqaadka jacaylkiisa. Sidoo kale, naxariista Rabbi waxaa mar walba la socda jacaylka Eebbe. Meel kasta oo jacaylka Eebbe tago, naxariista Eebbe kuma foga halkaas. Naxariistu waa ballantii Ilaah ee dadkiisa. Buugga Rooma 9:15, Waan u naxariisan doonaa kii aan ka helo, waanan u naxariisan doonaa kii aan ka helo. Tan micnaheedu waa naxariista Eebbe waa ballantii Ilaah ee dadkiisa.
Ilaah axdi buu la dhigtay Ibraahim. Axdigii Eebbe ee noloshii Ibraahim wuxuu ku fiday Isxaaq iyo Yacquub, dhammaan Isrealna waxay noqdeen kuwii ka qayb galay axdiga. Waxaa jira axdi naxariiseed oo lagu bilaabay dhiigga Ciise. Kafaaro gudka dembiga iyo naxariista, waa in dhiig la daadiyo. La yaab ma leh in carruurta Isreal laga badbaadiyey habeenka malaa'igta baabbi'intu booqatay dhulka Masar oo baabbi'isay midhihii ugu horreeyey ee Masriyiinta.
Ducooyinka axdiga ee naxariista leh ayaa dib u dhaqaajinaya naxariista Eebbe ee nolosha dadkiisa. Ogow, axdigii Eebbe waa daa’im, mana jirto wax burburin kara. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira waxyaabo aan samayno oo ka dhigi doona axdiga mid hurda. Masiixiyiin badan ayaa lagu xukumay meeshii ay ahayd in lagu caddeeyo sababta oo ah naxariista Eebbe ayaa ka aamustay noloshooda. Haddii naxariista Ilaah aysan ka sii hadli lahayn Esteer, waxaa la soo marin lahaa si waafaqsan sharciga oo dhan ka dib markay jebisay xeerkii anshaxa ee qasriga boqorka. Naxariista Rabbiguna waxay ka hadlaysay Daanyeel, oo Qorniinku wuxuu qoray in Daanyeel ka sharaf badnaa saaxiibbadiis.
Marka naxariista rabbigu ay nolosheenna ku shaqayso, tijaabooyinka iyo dhibtu waxay noqdaan wax la soo dhaafay. Waxaan u hadlayaa sidii hadal Ilaah, meel kasta oo noloshaada ka mid ah oo u baahan naxariista Eebbe. Waxaan amar ku bixiyey in maanta loo naxariisto magaca Ciise.
Aabbe, waxaan kuugu duceynayaa maalin kale oo qurux badan oo tan oo kale ah. Waxaan kuugu mahadnaqayaa fadliga leh maalin kale oo duco ah. Magacaagu ha ku sarreeyo magaca Ciise.
Aabbow, waayo, waa qoran tahay, Kii dembigiisa qariyaa wuu halligmi doonaa, laakiin kii qirta wuxuu heli doonaa naxariis. Waxaan dembiyadayda ku qiranayaa hortaada, maxaa yeelay, adiga oo keliya ayaan kugu dembaabay, oo waxaan hortaada ku sameeyey shar weyn. Waxaan codsanayaa in dhiiga daadanaya iskutallaabta Calvary; dembiyadayda waad ku maydhan doontaa magaca Ciise.
Aabe Sayidow, waxaan dib u cusboonaysiinayaa axdigii naxariista ee noloshayda maanta magaca Ciise. Meel kasta oo noloshayda ah oo u baahan naxariis, ha bilawdo inay iigu hadasho magaca Ciise.
Waxaan ku hadlayaa naxariista Eebbe meheraddayda. Waxaan ka baryayaa in naxariista Rabbi ay ganacsigayga kor u qaaddo. Nimcada ganacsigayga siin doonta dardargelin xagga ruuxa ah si ay uga fiicnaato dhammaan tartamayaashayda, waxaan ku baryayaa in nimcadan oo kale ay ku soo dhacdo meheraddayda magaca Ciise.
Sayidow, waxaan amar ku bixinayaa in jid kasta oo layga hor istaagay. Albaab kasta oo la xiray oo ka soo horjeedda naxariista sayidka ayaa bilaabi doonta inay maanta ku furto magaca Ciise.
Sayidow, horumar kasta oo dembiga dib u dhigay, iyada oo loo marayo naxariista axdiga Eebaha ugu sarreeya, horumarkaas ayaa bilaabmaya inay ku muuqdaan magaca Ciise.
Sayidow, waxaan ku amrayaa axdiga naxariista Eebbe carruurtayda. Qorniinku wuxuu leeyahay carruurtu waa dhaxalka Eebbe. Sidoo kale, waxaa la qoray in aniga iyo carruurtaydu aan u soconno calaamado iyo yaabab. Waxaan amar ku bixiyay inaan waxyeello u soo dhowaan carruurtayda magaca Ciise.
Waayo, waxaa qoran, Laakiinse Rabbigu wuxuu leeyahay, Xataa kuwa xoogga badan maxaabiis ahaan waa la kaxaysan doonaa, oo kuwa laga cabsadona waa la samatabbixin doonaa; Waayo, waxaan la muddici doonaa kan kula dirira, oo waan badbaadin doonaa carruurtaada. Sayidow, eraygaagu wuxuu ballanqaaday inaad la dagaallami doonto kuwa nala dagaallamaya, oo waxaad badbaadin doontaa carruurtayda. Awood kasta oo doonaysa inay waxyeello u geysato carruurtayda maanta waxay ku dhintaa magaca Ciise.
Sayidow, waxaan ku hadlayaa naxariista axdiga ee guurkayga. Si kasta oo cadowgu u soo weerarayo guurkayga, waxaan ka baryayaa in naxariista Rabbi ay maanta ku hor istaagto magaca Ciise.
Sayidow, waxaan joojinayaa weerar kasta oo jinni oo cadowgu ku hayo noloshayda maanta. Waan baabi'inayaa dhammaan qorshayaashooda qoyskayga magaca Ciise. Sayidow, meel kasta oo nolosha ka mid ah oo cadowgu ku soo duulay, waxaan ka baryayaa in naxariista Rabbi ay ka hawlgeliso ilaalinta Ilaah nolosha aniga iyo qoyskayga magaca Ciise.
Aabbow, eraygaagu wuxuu leeyahay waxaan ahay iftiinkii dunida, magaalo buuraha dul saaran oo aan la qarin karin. Sayidow, naxariistaadu had iyo goor ha iigu hadasho magaca Ciise.
Waxaan tirtiraa xukun kasta oo xun oo noloshayda iyo qoyskayga maanta ku jira magaca Ciise.
Sayidow, waxaan kuu baryayaa axdigaaga naxariista dalkayga. Eraygaagu wuxuu leeyahay waxaannu la mid nahay magaalo buuraha dul saaran oo aan la qarin karin. Sayidow, waxaan ka baryayaa in ammaanta qarankan aanay u noqon gudcur.
article PreviousSalaadaha Axdiga ee Horumarka
Next articleDucooyinka Axdiga Ee Barakada leh
21 Muhiimadda Salaadda
Sabuurradii 1-aad Macnaha Aayadda
Salaadda Dagaal iyo Xeerarka
30 Qodobbada Salaadda Si Loogu Soo Noqoto Dhammaan